'पानी संकटकाल' घोषणा गरिपाउँ
उर्जामन्त्री आगामी चार वर्षका लागि देशमा उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नुभएको र्सवविदितै छ । सुरुमा त 'संकटकाल' भन्ने शव्द सुनेर कतिपय र्सवसाधरण डराए आत्तिए । ०६२/६३ पश्चात त्यो 'संकटकाल' भन्ने शव्द उतिसारो सुनिएको थिएन । विचरा विजुलीबत्ती नै नपुगेका हुम्ला, जुम्ला, रुकुम तथा विकट जिल्लाका बासिन्दालाई के थाहा उर्जा संकटकाल भनेको ?
नागरिक्ता बनाउन शौचालय अनिवार्य
सुनसरी : तपाई नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउदै हुनुहुन्छ ? या कुनै पार्टीमा नयाँ सदस्य लिँदै हुनुहुन्छ ? यसका लागि तपाईको घरमा शौचालय अनिवार्य हुनुपर्छ । यदि, घर बनाएर पनि शौचालय बनाउनुभएको छैन भने तपाईले नागरिकता र पासपोर्ट दुवै बनाउन पाउनुहुन्न । पार्टीसदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न पनि पाउनुहुन्न ।
Results 25 - 30 of 4770